विश्लेषणः त्यो मर्ने-मार्ने र यो “मरिमेटने” देउवा- प्रचण्ड ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
विश्लेषणः त्यो मर्ने-मार्ने र यो “मरिमेटने” देउवा- प्रचण्ड !
काठमाण्डौ । नेपाली राजनीतिमा तत्काल निर्णय लिन सक्ने नेताका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिनिन्छ । त्यस्तै निर्णय गर्न सक्ने क्षमताले अहिले दुई नेतालाई एकठाउँमा उभ्याएको छ । माओवादी जनयुद्धको सुरुवात देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । २१ वर्षे यो समयावधिमा देउवा–प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा निकै उतार–चढाव आएको देखिन्छ । स्वभावजन्य पृष्ठभूमि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै आँटिला नेतामा पर्छन् । नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि निर्णय तत्काल लिन सक्ने नेताका रूपमा दुवैलाई चिनिन्छ ।
पछि पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कुनै लेखाजोखा नगरी निर्णय लिन दुवै खप्पिस छन् । जोखिम मोलेरै भए पनि आफूलाई लागेको कुरामा ‘बोल्ड डिसिजन’ लिन सक्ने नेताका रूपमा चिन्छन्, दुवै पार्टीका नेताहरू देउवा–प्रचण्डलाई । प्रचण्ड आफूलाई लागेको विषयमा प्रस्ट खुलेर कुरा गर्न रुचाउँछन्, तर देउवा अलिक ‘रिजर्भ’ बस्न रुचाउने नेता हुन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रस्तुत हुँदा देउवा आफू त्यत्ति नजानेजस्तो गरी अरूका कुरा बढी सुन्न र जान्न रुचाउँछन् । तर, प्रचण्ड भने आफ्ना कुरा बढी जानकारी दिन चाहन्छन् । सुरुमा काम गर्ने, तर त्यसको नतिजा पछि नराम्रो आए त्यही वेला पछुताउने खालको शैलीमा दुवैमा समानता देखिने नयाँ पत्रिकामा रामकृष्ण अधिकारी/रमेश सापकोटाले लेखेका छन्।
२०४८ सालको आमनिर्वाचनताका देउवासँग पहिलो भेट भएको प्रचण्ड बताउँछन् । ‘२०४८ सालको निर्वाचनका क्रममा संसद् उपयोग गर्ने हाम्रो नीति थियो । त्यही क्रममा देउवासँग भेट भएको हो,’ प्रचण्डले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘त्यसवेलादेखि नै उहाँसँग कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष, कहिले परोक्ष रूपमा छलफल हुँदै आएको छ ।’ देउवासँग द्वन्द्वकालमै पनि टेलिफोन संवाद हुने गरेको प्रचण्डले खुलासा गरे ।
‘देउवाजीसँग अलि बढी शान्ति प्रक्रियामा आउने सन्दर्भमा कुरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘म दाङमा थिएँ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, दाङबाट उहाँसँग मैले त्यतिवेला फोनमा कुरा गरेको थिएँ । शान्ति प्रक्रियाको वातावरण बनाउने क्रममा उहाँसँग दाङ जिल्लाबाट फोनमा कुराकानी गरियो, त्यो नै उहाँसँगको सम्बन्धमा आइसब्रेक थियो ।’ आफूसँग कुराकानी भएपछि नै देउवाले वार्ताका लागि उभ्याएको प्रचण्ड बताउँछन् ।
‘मसँग कुरा भएपछि देउवाले शान्ति प्रक्रियाको वार्ताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुभयो । मसँग कुरा गरेपछि उहाँले नेपालको एउटा बहादुर नेता प्रचण्ड हो भनेर बाहिर बोल्नु पनि भयो । त्यो सकारात्मक भनाइ बाहिर दिनुभयो र शान्ति सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर वातावरण पनि बनाउनुभयो ।’ शान्ति वार्ताको सुरुवात भएपछि माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई सर्त बनाएको थियो । तर, देउवाले नमानेपछि पहिलो वार्ता सफल हुन नसकेको प्रचण्ड स्मरण गर्छन् । त्यतिवेलादेखि देउवासँग राजनीतिक रूपले परिणाममुखी संवाद हुन थालेको उनले सुनाए ।
माओवादीले चलाएको युद्धकालमा देउवा–प्रचण्डका बीचमा भेट भएन । माओवादी नेताहरूले त्यसवेला पनि एमालेका शीर्ष नेता, अन्य वामपन्थी पार्टीका नेताहरू र कांग्रेसकै पनि कतिपय नेताहरूसँग भेटघाट र छलफल गरे पनि देउवासँग भने त्यस्तो भेटघाट हुन पाएको थिएन । त्यसो त देउवाले माओवादी नेताहरूको सबैभन्दा माथिल्लो नेतालाई भेटेको भनेको कृष्णबहादुर महरालाई नै हो । २०५८ सालमा सरकार–माओवादीबीच चलेको पहिलो वार्तामा प्रचण्डले महराको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर पठाएका थिए । देउवासँग माओवादीको उच्चस्तरीय नेतृत्वले भेटेको त्यो नै पहिलो हो ।
त्यहीवेलादेखि माओवादी नेतृत्वले देउवासँग आवश्यकताका आधारमा क्रमशः सम्बन्ध र भेटघाट स्थापित गर्दै लगेको हो । ‘सम्बन्ध राजनीतिक उद्देश्यका कारण हुन्छ, व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि हुन्छन्,’ महराले भने, ‘राजनीतिक सम्बन्ध भइराख्ने भन्ने हुँदैन, राजनीतिक उतारचढावसँगै सम्बन्धमा पनि उतारचढाव भइराख्छ ।’ देउवानिकट कांग्रेस नेता डा. महत पनि यी दुई नेताबीच दोस्रो जनआन्दोलनपछि पहिलो भेट भएको बताउँछन् । ‘माओवादीले ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष ४० बुँदे मागपत्र बुझाउँदा डा.बाबुराम भट्टराईले भेटेकाले त्यसअघि ०४८ सालतिरै देउवा र प्रचण्डबीच भेट भएको होला,’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने देउवा–प्रचण्ड सम्बन्ध अलिक बढी बाक्लिन थालेको हो । खासखास अप्ठ्यारा समयमा दुई नेताहरूबीचमा बढी नै भेटघाट हुने गर्दथ्यो । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादको निधनपछि देउवा–प्रचण्ड भेट थप बाक्लिएको थियो । ‘शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँसँग अलिक बढी नजिकबाट छलफल हुन थाल्यो,’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘पछिल्लो चरणको कुरा गर्ने हो भने उहाँसँग मेरो राजनीतिक विषयको छलफल मात्र नभएर पारिवारिक सम्बन्ध पनि बढ्दै गएको छ ।
मेरो र उहाँको परिवारबीच आपसमा भेटघाट गर्ने, सँगै खाना खाने क्रम बढ्न थाल्यो ।’ पारिवारिक भेटघाटले पनि देउवासँग खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरण बनेको प्रचण्ड बताउँछन् । ‘परिवारका सदस्यसँगको भेटघाटपछि उहासँग खुलेर कुराकानी गर्न सकिने, उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्न सक्ने वातावरण बन्यो,’ देउवासँगको सम्बन्ध प्रस्ट्याउँदै प्रचण्ड भन्छन्, ‘त्यो कुराले पनि अहिले समझदारी बनाउन मद्दत पुगेजस्तो मलाई लाग्छ ।’
गिरिजाप्रसादको निधनपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भए पनि देउवा पार्टीभित्र प्रभावशाली थिए । कतिपय विषय देउवासँगको सहमतिमा मात्र टुंग्याउन सहज हुने हुँदा प्रचण्ड उनीसँगको परामर्शलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्थे । देउवाले पनि प्रचण्डलाई वेलावेलामा आफ्नै निवासमा डिनरका लागि आमन्त्रण गरिरहन्थे । यी दुई नेताका बीचमा पछिल्ला केही वर्षयता पारिवारिक सम्बन्ध पनि स्थापित हुँदै जान थालेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
देउवाले खासखास सन्दर्भमा प्रचण्डको सपरिवारलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएर डिनर खुवाउँथे । प्रचण्डकहाँ भने देउवा एकपटक मात्र खाना खान पुगेका छन् । बिहानको समयमा यी दुई नेताहरूबीच भेटघाट हुँदा चियाकफीमा मन भुलाउँछन् । तर, साँझको समयमा डिनर सँगै बसेर खान्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेसले सरकारमा साथ दिने आश्वासन दियो । दुई पार्टीबीच औपचारिक–अनौपचारिक छलफल पनि उत्तिकै भए । तर, त्यसवेला त्यो प्रयासले सार्थकता दिन सकेन । त्यसले दुई नेताबीच विश्वासको संकट देखिन थाल्यो । अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने क्रममा देउवा–प्रचण्ड एकै ठाउँमा उभिएका छन् । दुवै मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
फेरि सन्दर्भ र अवस्था फेरिदै यी दुवै दल र दुवै नेता सत्ता सहयोगीसमेत बन्दै छन् । यस्तो वेला पहिलेका मर्ने र मार्ने खेलको अध्याय अब सकिएको बताउँछन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कँडेल । ‘द्वन्द्वकालमा माओवादी आफ्नो क्रियाकलापमा थियो, हामी शान्ति स्थापनामा लागेका थियौँ, राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुँदैन भनेजस्तै अहिले फेरि कांग्रेस–माओवादी सत्ता सहयोगीसम्म हुनु परिवर्तनका लागि हो,’ कँडेल भन्छन्, ‘दुवैलाई सत्तामा आउन एक अर्को नभई भएको छैन । एक–अर्कालाई सिध्याउने होडबाजी थियो । तर, यी शक्ति एक ठाउँमा आएका छन् ।’
०५२ देखि ०६२ सालका घटना बिर्साउन नजिकिंदै देउवा र प्रचण्ड
एक राजनीतिक विश्लेषक देउवा र प्रचण्डबीचको विकसित सम्बन्ध र घटनालाई २०५२ देखि २०६२ सम्ममा घटनाक्रम बिर्सने प्रयत्नमा रहेको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘५२ सालदेखि ६२ सालसम्म राजनीतिक, आपराधिक जे घटना भए, यी घटनाक्रम बिर्सने प्रयत्नमा दुई नेता देखिन्छन्,’ ती राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने छ ।
प्राज्ञिक, बौद्धिक र कानुनी रूपले ५२ देखि ६२ सम्मको विषय उठ्लान्, तर अब राजनीतिक रूपमा उठाउनुका कुनै अर्थ छैन भन्ने सन्देश देउवा र प्रचण्डले दिन खोजेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘चर्को राष्ट्रवाद’, तीनवटै चुनाव आफैँ गर्छु भन्ने दम्भले पनि देउवा र प्रचण्डलाई एकठाउँमा ल्याउने काम गरेको ती विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
टाउकाको मोल तोकेको घोषणा गर्ने तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री कँडेललाई समेत माओवादीले निसाना बनायो । ललितपुर कुसुन्तीमा १२ भदौ २०६० मा माओवादीका सात कार्यकर्ताले कँडेलमाथि गोली प्रहार गरेका थिए । ६ वटा गोली लागेर पनि उनी बाँच्न सफल भए । ‘चित्रलेखा यादवको सानेपाको घरबाट फर्किंदै थिएँ, कुसुन्ती पञ्चेश्वर मन्दिरछेउमा सातजनाको जत्थाले आक्रमण ग-यो । दुई हतियारधारीले गाडीमा फाइरिङ गरे,’ कहालीलाग्दो सो घटनाबारे कँडेल भन्छन्, ‘१७ राउन्ड गोली प्रहार भएकोमा ६ वटा गोली ढाड, पाखुरा, काखीमा लागेर पनि बाँच्न सकेँ । अहिले पनि काखीमा एउटा गोली बोकेर हिँडेको छु ।’